Achọpụtara Windows malware n'ihe karịrị otu narị ngwa ọdịnala Android | Gam akporosis
Achọpụtara Windows malware na ihe karịrị otu narị ngwa gam akporo
Jose Alfocea | | Nche
Ndị nyocha si ụlọ ọrụ nchekwa nke America Palo Alto Networks achọpụtala Windows malware na 132 ngwa gam akporo, ọ bụ ezie na ọnọdụ a agaghị enwe mmetụta na sistemụ arụmọrụ n'onwe ya.
Dịka nsonaazụ nke a ọmụmụ, koodu ọjọọ bịara n'ụdị "obere IFrames zoro ezo" ma ọ bụ HTML akwụkwọ agbakwunyere n'ime akwụkwọ HTML ndị ọzọ na-ejikọ na ngalaba ọjọọ site na ngwa.
132 ngwa oria a yiri si
Ọ bụ ezie na ngwa 132 emetụta bụ ọrụ nke ngụkọta nke ndị mmepe asaa na-enweghị mmekọ n’etiti onwe ha, Netwọ Palo Alto rụtụrụ aka na ha niile pụtara na ha si Indonesia ma eleghị anya ha amaghịdị ịdị adị nke malware ahụ.
"Nnyocha anyị mere na-egosi na ndị mepụtara ngwa ndị a nje anaghị ata ụta, mana ha bụ ndị ahụ metụtara n'onwe ha," ndị ọrụ nyocha ahụ kwuru. "Anyị kwenyere na nyiwe mmepe mmepe nke ngwa nwere ike ibute ọrịa malware nke na-enyocha peeji HTML ma wụnye ọdịnaya ọjọọ na njedebe nke peeji HTML ọ chọtara."
Ngwa ndị malware a butere dị iche iche, site na ngwa nri na ụfọdụ ngwa ndị ọzọ ma ọ bụ ngwa ịkọ ugbo, agbanyeghị, ha niile nwere dị ka otu denominator na ha na-eji otu technology iji gosipụta static HTML peeji nke:
Ihe ngwa niile nwere bụ na ha na-eji gam akporo WebView egosipụta peeji HTML dị iche iche. Na mbido nke mbu, ihu akwukwo obula adighi eme ihe karia ibu ihe oyiyi echekwara n'ime ma gosiputa ederede ederede. Otú ọ dị, nyocha miri emi nke HTML n'ezie na-ekpughe obere IFrame zoro ezo nke na-ejikọta na ngalaba ọjọọ ndị ama ama. Ọ bụ ezie na e jikọtara ngalaba ndị ejikọtara n'oge nyocha ahụ, eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ngwa Google Play na-ebute oria bụ ihe ịtụnanya.
Otu nke ngwa oria a malware | IHE: Palo Alto Netwọk
Na nke a, achọpụtara malware emebighi mmebi ọ bụla, n'ụzọ bụ isi n'ihi na emebere faịlụ ahụ maka Windows, ọ bụghị maka gam akporo:
Ihe kachasị dị ịrịba ama bụ na otu n'ime peeji ndị oria a na-agba mbọ ibudata ma wụnye ajọ Microsoft Windows na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'oge a na-ebu ibe ahụ, mana ebe ọ bụ na ngwaọrụ anaghị arụ ọrụ na Windows, ọ gaghị agba ọsọ. Omume a dabara nke ọma na ụdị nke egwu ndị na-abụghị gam akporo wepụtara site na Google gam akporo Security na nso nso a. Dabere na nhazi ahụ, Ihe iyi egwu na-abụghị gam akporo na-ezo aka na ngwa ndị na-enweghị ike ibute onye ọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ gam akporo, mana nwere ihe ndị nwere ike ibibi ihe maka nyiwe ndị ọzọ.
Agbanyeghị, Neti Palo Alto dọrọ aka na ntị na nke a nwere ike iduga ọnọdụ dị iche iche na-echegbu onwe gị ebe a na-eji nyiwe dị ka ndị na-ebu malware nke na-arụ ọrụ n'ebe ọzọ:
Ka ọ dị ugbu a, ngwa ọdịnala nke ọrịa agaghị emerụ ndị ọrụ gam akporo nsogbu. Agbanyeghị, nke a na-anọchite ụzọ ọhụụ maka nyiwe ịbụ 'onye na-ebu' malware: ha anaghị ebute ọrịa, kama ọ na-agbasa malware ahụ na nyiwe ndị ọzọ n'amaghị ama. Dika mwakpo XcodeGhost anyi choputara na 2015, iyi egwu a na-egosi otu ndi oru mmepe nwere ike isi metuta ndi oru njedebe.
Companylọ ọrụ nchekwa ahụ gosikwara na, na ụfọdụ mmezi ndị gara aga, ndị mwakpo ahụ nwere ike iji ụdị malware a "Gbanwee mgbagha nke ngwa ahụ, ya bụ, gbakwunye ngwa ọrụ ụzọ, ikike ndị ọzọ ma ọ bụ hapụ faịlụ APK ọjọọ iji mee ka ikike ha dịkwuo elu" .
Palo Alto nke agwalarị nchọpụta ya na nsonaazụ nke nyocha ya na ndị ọrụ nchekwa Google, nke ahụ ewepula ngwa ndị oria a na Playlọ Ahịa Google.
Anyị emeela ka ndị ọrụ nchekwa Google nweta ihe anyị chọpụtara ma ewepụla ngwa ọdịnala niile na Google Play.
Think chere na sistemụ Google iji chọta malware na-arụ ọrụ n'ụzọ kachasị mma, tụmadị ịdị adị nke ọtụtụ ijeri ngwaọrụ gam akporo na ọtụtụ nde ngwa, ma ọ bụ, n'ụzọ megidere, ị na-eche na mbọ ya nwere ike ịdị ukwuu?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Achọpụtara Windows malware na ihe karịrị otu narị ngwa gam akporo
Google agaghị ewepụta kọmputa ndị ọzọ Pixel
Samsung nwere ike inwe 12 nde Galaxy S8s njikere maka igba egbe